Nhau - Basa reEPDM sponge tepi mune butyl inopisa-inomira chipanje zvigadzirwa uye maitiro ekushandisa
Basa re EPDM sponge tepi mune butyl kupisa-nemishonga sponge zvigadzirwa uye maitiro ekushandisa
Butyl rabha ine yakanakisa gasi kukwana uye kupisa kupisa, uye inoshandiswa zvakanyanya mukugadzirwa kweakasiyana-siyana anopisa marabha zvigadzirwa, zvinopisa kupisa chipanje furo rabha zvigadzirwa ndeimwe yacho. Vazhinji vemukati chubhu vanogadzira vagadziri vanoziva kuti iyo butyl yemukati chubhu yekugadzirisa maitiro ichawedzera yakaenzana huwandu hwe EPDM rabha kana yakadzokororwa rabha, chinangwa ndechekuwedzera hupenyu hwebasa rebutiri yemukati chubhu. Saka zvakafanira here kuwedzera EPDM rabha kana uchishandisa butyl rabha mbishi kupisa inodzivirira chipanji furo rabha zvigadzirwa? Kana zvirizvo, inyaya dzipi dzinofanira kucherechedzwa pakuwedzera?
1. Basa re EPDM rabha mune butyl kupisa-nemishonga chipanje furo zvigadzirwa
EPDM rabha / zvishandiswezve rabha mushure mekukwegura kuomarara, butyl zvigadzirwa zverabha zvichave zvakapfava uye zvinonamira mushure mekukwegura, saka kushandiswa kweyakafanira huwandu hwe EPDM rabha mune butyl inopisa-isinganetsi chipanji furo rabha zvigadzirwa zvinogona kutsiva kukanganisa kwe butyl rabha, kunatsiridza mashandiro ebutyl anopisa kupisa-sponge foam zvigadzirwa.
EPDM rabha / zvishandiswezve rabha uye butyl rabha, yakanyanya tembiricha kuramba, kukwegura kuramba (kunyanya ozone kuramba) kupfuura butyl rabha; butyl kupisa-nemishonga chipanji furo zvigadzirwa mune yakakodzera huwandu hwe EPDM rabha inogona kuvandudza kupisa kupisa kwefuro zvigadzirwa, kuchembera kuramba, kuwedzera nguva yekuwedzera hupenyu hwebasa hwekupisa-husinga piki sponge.
2. Butyl kupisa-nemishonga chipanji zvigadzirwa mune EPDM yerubber kusarudza hunyanzvi
Iko kushandiswa kwe EPDM yerabha zvinhu kuvandudza mashandiro ezve kupisa-zvinopesana nesiponji zvigadzirwa, kubva pamutengo wekushandisa EPDM yakadzoreredzwa rabha. EPDM isina kubviswa rabha musanganiswa kana marara EPDM zvigadzirwa zverabha zvakagadziriswazve uye zvakagadziriswazve EPDM rabha yakakwira uye yakadzika tembiricha kuramba, anti-kukwegura zvivakwa uye EPDM rabha zvakangofanana, mutengo wakaderera zvakanyanya kupfuura yekutanga EPDM rabha, uye butyl rabha kuenderana kuri nani, Inogona kuvandudza mashandiro ese ebutiri anopisa kupisa-chipukisi zvigadzirwa pasi pechinangwa chekudzora yakawanda mbishi zvinhu Kune epanyama uye echimedu zvivakwa zvezvimwe zvinoomesesa zvinodiwa zvekupisa-zvinodzivirira chipanji 2LLYY422-SJ zvigadzirwa, zvigadzirwa zverabha zvigadzirwa zvinogona kusanganiswa neyakakodzera huwandu hwe EPDM rabha mu butyl rabha kuona chigadzirwa chigadzirwa.
3. Maitiro ekugadzirisa EPDM rabha uye butyl rabha vulcanization kumhanya
Sezvo isu tese tichiziva, iyo vulcanization yesiponji furo yerabha zvigadzirwa uye kupupa furo kunoitwa panguva imwe chete, iyo vulcanization kumhanya kupfuura iyo inopupuma kumhanya kana kukurumidza kupfuura iyo inopupuma kumhanya ichakanganisa iyo inopupuma mhedzisiro yemafuro zvigadzirwa uye inopupuma kushanda; butyl rabha uye EPDM yerabha vulcanization performance, mamiriro e vulcanization akasiyana, saka zvigadzirwa zverabha zvigadzirwa zvinofanirwa kuve zvine musoro dhizaini yeiyo vulcanization system kuona kuti iyo vulcanization uye kupupa furo panguva imwe chete. Kazhinji, zvigadzirwa zverabha vagadziri vanogona kusarudza sarufa vulcanization, nekushandiswa kwerabha accelerator DM, iko kushandiswa kwekupupira mumiririri OBSH furo, kubatana kuri nani pakati pekumhanya kwe vulcanization uye kupupa furo.
Iko kushandiswa kwe EPDM yakadzokororwa rabha kana EPDM rabha kunatsiridza mashandiro uye hupenyu hweakapedza butyl inopisa-inomira chipanje fekitori zvigadzirwa, zverabha zvigadzirwa vagadziri vanodawo kugadzirisa nemazvo mhando uye huwandu hwevamwe vanoenderana vamiririri mune fomula, iwe unogona kushandisa semi -inosimbiswa kabhoni dema kusimbisa, parafini oiri kupfavisa, parafini wakisi inopesana nekukwegura, pamwe nekushandiswa kwe zinc oxide, stearic acid uye magnesium oxide, kuenderera mberi nekuvandudza butyl / EPDM yerabhora inopesana nekupisa chipanji furo zvigadzirwa zvakakwana Iko kushandiswa kwe zinc oxide , stearic acid uye magnesium oxide inogona kuwedzera kuvandudza kuita kwese uye hupenyu hwebasa re butyl / EPDM kupisa nemishonga yesiponji zvigadzirwa.